शा’री’रिक स’म्बन्धको विषयमा म’हिलाहरुले सो’च्छन् यस्तो अ’नौठो कुरा जानी राखौ !. – AB Sansar
शा’री’रिक स’म्बन्धको विषयमा म’हिलाहरुले सो’च्छन् यस्तो अ’नौठो कुरा जानी राखौ !.
October 1, 2020 adminLeaveaComment on शा’री’रिक स’म्बन्धको विषयमा म’हिलाहरुले सो’च्छन् यस्तो अ’नौठो कुरा जानी राखौ !.
र मौ’का पाउँदा उनीहरुले अ’नौठा अ’नौठा यौ’निक अ’भ्यासको प’रीक्षण समेत गर्न म’न प’राउँछन् । र यो पनि युवतीहरु विवाहपछि मोटाउनुको खास कारण यस्तो छ -दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ । विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।
विवाह पछि जीवनमा आएको परिवर्तनका कारण मानिसहरु तनावमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा भोक बढाउने हर्मोनको लेभल बढ्ने गर्दछ जसले तौल बढ्ने गर्दछ । मानिसहरु विवाह पहिले राम्रो देखिनका लागि आफ्नो डाइट र फिटनेसमा पूरा ध्यान दिने गर्दछन् तर विवाह पछि जीवनशैलीमा परिवर्तन हुने भएका कारण यस्ता कुराहरु छुट्ने गर्दछ जसले तौल बढ्छ ।
देशैभरी छरिएर रहेका सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुका लागि भर्खरै आयो अत्यन्तै खुसिको खबर !
माछा मा’र्न भनि गएकी दुई युवतीलाई सशस्त्र प्रहरी जनावले यस्ताे घिनलाग्दाे हर्कत गरेपछि.
भाउजु सुनिता र देवरको एउटै सारीको फेरमा लाश, कारण खुल्दा सबै चकित !